Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Irlandey » Ryanair dia nahazo tombony tamin'ny fifaninanana tamin'ny Boeing 737 MAX
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao Mafana Irlandey • Vaovao • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Na dia teo aza ny fiorenan'ny Boeing 737 MAX tamin'ny 2019 noho ny olana ara-piarovana, dia nifampiraharaha tamin'ny fividianana 210 unit i Ryanair, miaraka amina 12 be indrindra ho an'ny vanim-potoana fahavaratra 2021.
Ny Boeing 737 MAX dia hanome tombony fifaninanana matanjaka an'i Ryanair ao anatin'ny dimy taona ho avy.
Ny Boeing 737 MAX dia hanatsara ny sosokevitra maharitra an'i Ryanair amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fanjifana solika amin'ny 16% isaky ny seza.
Ny Boeing 737 MAX dia ahafahana manana mpandeha 4% fanampiny.
Ryanair dia nanambara ny fahatongavany voalohany ny Boeing 737 MAX jet, izay nofaritan'ny mpitatitra mora vidina toy ny 'game-changer'. Na eo aza ny fiorenan'ny fiaramanidina amin'ny taona 2019 noho ny olana ara-piarovana, Ryanair ny fividianana fividianana 210 unit, miaraka amina 12 ambony indrindra ho an'ny vanim-potoana fahavaratra 2021. Ny fiaramanidina dia hanatsara ny tolo-kevitr'i Ryanair maharitra amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fanjifana solika amin'ny 16% isaky ny seza, hampihena ny fandefasana tabataba amin'ny 40%, ary ny fahazoana mpandeha 4% fanampiny - ireo rehetra ireo dia hanome tombony fifaninanana matanjaka an'i Ryanair ao anatin'ny dimy taona ho avy.
Ny tombony maharitra amin'ny fiaramanidina dia hihaona amin'ny safidin'ny mpanjifa miovaova kokoa ho an'ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana. Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanjifa Q1 2021 an'ny indostrialy dia nilaza ny 76% n'ny mpamaly fa "foana", "matetika", na "somary" voakasiky ny fahamoram-panahin'ny vokatra iray, manasongadina ny filan'ny fiaramanidina maharitra. Vokatr'izany, Ryanair dia nahita toerana miavaka tamin'ny fihaonana tamin'ny fironana maoderina sy ny tsena nentin-drazana nentim-paharazana tamin'ny fanolorana saran-dàlana ambany. Ny valim-panadihadiana nataon'ny indostrialy farany teo dia nanohana bebe kokoa io fahatsapana io amin'ny saran-dàlana ambany indrindra, miaraka amin'ny 53% amin'ireo namaly fa nilaza fa ny vidiny no zava-dehibe indrindra rehefa misafidy kaompaniam-pitaterana an'habakabaka.
Ryanair dia nahatakatra sy nanorina tamin'ny marika misy azy amin'ny tsy fanolorana saran-dàlana ambany fotsiny, fa ny fanolorana serivisy maitso maitso ary mety ambany aza ho an'ny mpanjifany. Vokatr'izany, ny vokatra dia tsy hanintona ireo mpandeha mahatsiaro tontolo iainana ihany, fa hanohy hihaona amin'ny tsenany marobe momba ny sarany mora vidy.
Ny ahiahy dia mijanona aorian'ny fianjerana mahatsiravina nataon'ny Lion Air tamin'ny volana oktobra 2018 sy ny fianjeran'i Ethiopian Airlines tamin'ny martsa 2019. Nahatonga ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hanafoana ny baiko sy hitady onitra izany. Ryanair, na izany aza, dia nanolo-tena hatrany Boeing 737 MAX ary, raha ny filazan'ny CEO Michael O'Leary, ny orinasa dia nahazo fihenam-bidy 'tena maotina' amin'ny baiko.
Ny fiaramanidina koa dia nodinihin'ny Federal Aviation Administration (FAA) nandritra ny roa taona niorenany ary ny fanapahan-kevitra hamela azy io hiakatra eny amin'ny habakabaka indray dia tsy noraisina maivana.
Farany, ny vidin'ny fiasan'ny fiaramanidina ambany indrindra dia tafiditra tsara amin'ny maodelim-pandraharahana an'i Ryanair. Ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia tsy afaka mividy fiaramanidina vaovao na manolo-tena amin'ny fampanofana noho ny areti-mandringana, ka mamela azy ireo amina sambo antitra sy kely toekarena kokoa. Satria i Ryanair dia niatrika ny fitetezam-paritany taorian'ny taona 2022 niaraka tamin'ny sarany ambany, nefa ny tombony azo kokoa, dia hahazo tombony azo amin'ny fifaninanana mazava kokoa amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka maro hafa.